Gọọmenti ala Naịjirịa na-ekwe ndị Naịjirịa nkwa n’a ga-enwe ezigbo ọnọdụ nchekwa na mpaghara ala Naịjirịa niile n’oge ntụli aka ọchịchị a na-abịa abịa. Ndị ọrụ nchekwa ga-ahụ n’e chekwara ndụ ndị mmadụ na ndị ọrụ ngalaba na-ahazi ndọrọndọrọ ọchịchị. A ga-eme ka ntụli aka nke afọ gaa siriri werere.
Mgbe ọ na-agwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị okwu n’Abuja, onye Minista na-ahụ maka ozi pụrụ iche, Saminu Turaki, kpọkuru ndị ala Naịjirịa ka onye ọbụna pụta n’igwe binye aka n’akwụkwọ, họpụta ndị ga-achị ha. Ịbinye aka na-akwụkwọ bụ ọlụ dịrị nwa afọ Naịjirịa ọbụna.
A ga-amalite ibinye aka n’akwụkwọ n’ abalị 28 nke onwa a.